Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Gerard Moreno Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Gerard Moreno Biography nke a na - agwa gị Eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, mbido ya, ndị nne na nna, ezinaụlọ ya, nwunye ya (Nuria), ụmụaka (Melissa na Marta), ibi ndụ, ndụ onwe onye na uru net wdg.
Na nkenke, nke a bụ Life Life of a Spanish Goal Machine. Nwatakịrị nwoke nke nna ya zụrụ ka o nwee obi ọdụm na iguzogide ihe ọ bụla ndụ na-atụ ya. Akụkọ anyị banyere Spanish malitere site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Iji mee ka obi dị gị ụtọ na-agụ akụkọ banyere Gerard Moreno Bio, anyị kpebiri ịkọwa nwata na nwata ya ma bulie gallery. Obi abụọ adịghị ya, foto dị n'okpuru ebe a na-achikota njem ndụ nke Akụkọ Ochie Villarreal.
Gerard Moreno Biography - Lee mmalite ndụ ya na nnukwu ịrị elu.
Ee, onye ọ bụla maara na onye ọkpọ Spanish bụ onye ọkpụkpọ zuru ezu nke gbawara mgbe ọ dị afọ 29 na ndepụta nke ihe mgbaru ọsọ nye aha ya. O doro anya na ọ na-agbagha Spain kacha egwu egwuregwu - n'oge ederede.
N'agbanyeghị nkwanye ugwu, ọ bụ mmadụ ole na ole na-akwado egwuregwu bọọlụ maara Gerard Moreno's Life Story. Lifebogger emego usoro iji mepụta ya - maka gị na maka ịgba bọọlụ. Ugbu a na-ebutụbeghị, ka anyị bido.
Akụkọ Gerard Moreno nke Childhoodmụaka:
Maka ndị na - ebido Biography, ọ na - aza aha zuru oke - Gerard Moreno Balagueró. A mụrụ ndị na-agba ọsọ ọkachamara na Spanish na 7th nke Eprel 1992 na Nna ya, Didac Moreno na obere nne a ma ama, n'obodo Santa Perpètua, Spain.
Gerard Moreno bịara n'ụwa dị ka nwa mbụ na nwa nwoke n'ime ụmụ abụọ (ya na nwanne) nke amụrụ site na njikọ alụmdi na nwunye dị n'etiti nne na nna ya na-ese n'okpuru.
Zute Gerard Moreno Ndị nne na nna - Nna ya, Didac na nne na-amụmụ ọnụ ọchị.
Villarreal CF Akụkọ Mgbe Ochie nọrọ oge ọ childhoodụ nwata mgbe ọ bụ nwata na Catalonia, n'akụkụ ugwu ọwụwa anyanwụ Spain. Gerard Moreno tolitere n'akụkụ nwanne ya nwoke nke mere ka ndụ nwata ya zuru oke.
Dịka nwata, Gerard mepụtara ụdị isi a siri ike maka ndụ site na nkuzi sitere n'aka ndị mụrụ ya - ọkachasị papa ya.
Na mbido, Didac Moreno kụziiri Gerard na nwanne ya nwoke eziokwu ahụ na ha kwesịrị ịdị njikere n'ihe ọ bụla ndụ na-atụ ha na àjà ahụ enweghị isi.
Dịka ụmụaka, Gerard Monero na nwanne ya nwoke nọrọ ọtụtụ oge na nna ha. Didac kụziiri ụmụ ya ihe banyere ndụ.
N’oge ọ dị obere, ịkụziri ụmụ ya omume nkịta bụ ihe dị nnọọ ọhụrụ nye nna. Ọ dị ka a ga - asị na Didac Moreno maara na ndụ agaghị adị mfe maka ụmụ ya nwoke - ọkachasị Gerard n'ọchịchọ ya inwe ihe ịga nke ọma.
N'ikwu okwu banyere ọdịnihu, Gerard Moreno nwata banyere nrọ ya niile, nke ga - ahụ ya ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba ọsọ. Enye ama ama bọl etieti onyụn̄ ada ediwak hour ebre bọl ke mme mfafaha usụn̄ ye n̄kpri in̄wan̄ oro ẹkedude ẹkpere ubon esie.
Gerard Moreno Scar - Ihe Mberede Childhoodmụaka:
Football ahapụwo nnukwu ọnya na Moreno nke na-egosipụta àgwà ya ugbu a. Ugbu a lee ihe mere.
Ka ya na ndị enyi ya na-agba bọọlụ, bọọlụ dara n’elu bekee. Gerard ji ọsọ gaa ịnara bọọlụ ahụ, ọrụ nke gụnyere ịrị ụgbụ. Mgbe ọ rutere n'elu ma na-anakọta bọl ahụ, ogbenye Gerrard gbapụrụ.
N'ụzọ dị mwute, o nwere anya mmiri na ihu ya, egwu nke dugara na nwata nwoke dara ogbenye na-enweta ngọngọ nke 27 iji mechie mmerụ ahụ. N'agbanyeghị mmerụ ahụ, ọ ka kwupụtara ọchịchọ ya ịchụso ọrụ.
Ndị nne na nna Gerard Moreno nọ ya n'ebe ahụ n'oge nsogbu ya niile. Ha kwere nkwa iduzi ya n'ụzọ ga-eme nke ọma. Nke a bụ ihe mere mama ya na papa ya (Didac) ji were aka ha dozie ya ka ọ bụrụ nkịta.
Gerard Moreno Ezinụlọ:
Onye Spen na-abịa site na ezinụlọ Barcelona kacha umeala n'obi ị nwere ike iche.
Ndị na-agba ọsọ na Spanish si n'ezinụlọ na-arụsi ọrụ ike ma dị umeala n'obi bụ ndị ndụ ha gbadoro ụkwụ na-enwe nnukwu àgwà, ịhụnanya na nkwanye ùgwù maka ibe ha.
Ọ bụrụ na ị maghị, Spaniard bụ nwa nke ndị ịgba ọsọ. Ọ sitere na ezinụlọ na-agba bọlbụ - egwuregwu ahụ na-agbafe ha. Papa Gerard Moreno bụ onye na-agba ọsọ lara ezumike nká nke lara ezumike nká mgbe Gerard na nwanne ya nwoke ka dị obere.
N'aka nke ọzọ, nne Gerard Moreno bụ onye nwe ụlọ gụrụ akwụkwọ. Ọ na - ebu ọrụ ikpeazụ maka ọdịmma nke di ya (Didac Moreno) yana ụmụ ya nwoke abụọ - Gerard na nwanne ya nwoke. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, onye Spain si n'ezinụlọ dị umeala n'obi.
Ihe mbu mbu, Striker sitere na otu n'ime Mpaghara Mpaghara Barcelona nke dị nso n'ụsọ oké osimiri nke ugwu ọwụwa anyanwụ Spain. Anyị akwadebewo map dị n'okpuru ebe a iji nyere aka kọwaa Santa Perpètua de Mogoda - ezinụlọ Gerard Moreno.
Maapụ a kọwara Gerard Moreno Family Origin.
Onye ọgba bọọlụ bụ onye ama ama n’obodo ya, Santa Perpètua de Mogoda nke ihe ruru mmadụ 26,000 bi. Obodo a ama ama n’ogige ntụrụndụ ya, ụlọ ụka ya na ọba akwụkwọ Biblioteca Josep Jardí.
Gerard Moreno Mmụta na Bulọ Ọrụ:
Chi ọbụbọ nke narị afọ iri ọhụrụ meghere nye ya ọhụụ. Mgbe oge ruru, nwata ahụ debara aha ya dị ka nwa akwụkwọ-egwuregwu na mmemme Barcelona nke a na-eme na Club de Futbol Damm.
Gerard tinyere Carles Casanova (ndị na-eto eto na-eto eto) nabatara Damm mgbe ọ dị obere. Ha bụkarịrị ndị bọọlụ bọọlụ n'okporo ámá ndị ahọpụtara n'ihi oke ọrụ ha na egwuregwu mpaghara.
Ná mmalite, Gerard malitere iji bọl bọlbụ mee ihe ndị na-adịghị ahụkebe - nke ka ukwuu karịa ihe ụmụaka ọgbọ ya nwere ike ime. O nwere echiche siri ike na ọkwa ya na mmemme ahụ toro ngwa ngwa.
N'ime otu afọ (afọ itoolu), e lere ya anya dị ka onye tozuru oke isonye na ọnwụnwa maka agụmakwụkwọ ka elu na Barcelona. N'afọ ahụ 2001 hụrụ Espanyol (otu n'ime ụlọ akwụkwọ kachasị na Barcelona) na-akpọ nwata maka ule.
Gerard Moreno Football Akụkọ:
Dị ka ọtụtụ ndị tụrụ anya ya, kpakpando ahụ na-ebili na-agafe ule dị iche iche na agba na-efe efe wee banye n'ime akwụkwọ agụmakwụkwọ Blanquiazules. Espanyol bịanyere aka na Gerard n'ihi na ọ pụtara ìhè n'ịhụnanya ya na ịme ihe mgbaru ọsọ, mgbe ahụ na Damm.
Na Espanyol, a na-ahụta Gerard dị ka onye nwere uche tozuru oke - buru ibu karịa afọ ndụ ya. Ọ bụ onye ndu 10 a nke meriri ọtụtụ goolu (ọkachasị ya n'isi) ma duru ndị otu ya ọtụtụ mmeri.
Nakwa ịmara, obere Garard bụkwa nwa na-agba bọl na-eje ozi na ndị isi nke Espanyol. Onye na-eto eto nwere obi ụtọ na-echeta Raúl Tamudo (otu n'ime ndị na-agba ọsọ ụkwụ nke Espanyol) na-eso ya na-eme ihe mgbaru ọsọ mgbe ndị mụrụ ya na ndị ezinụlọ ya ji ọ joyụ na-ele anya.
Akụkọ Gerard Moreno jụrụ:
Ndị na-agba ọsọ agụmakwụkwọ nke Spanish gara n'ihu ịbụ otu n'ime atụmanya kachasị elu maka Espanyol ruo afọ 15 - mgbe ihe a na-atụghị anya ya mere. N'afọ ahụ 2007, Gerard chere ihu ndakpọ olileanya kasịnụ nke ndụ ya niile maka ihe ọ na-enweghị ike ịchịkwa.
Ọ bụrụ na ị maghị, Espanyol chụpụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ mmuta ha mgbe ha ghọtara na ọ nweghị ahụ iji gaa nke ọma. N'ihi nke a, ụlọ akwụkwọ mmuta ahụ kpebiri ime ka ndị ọzọ na-aga n'ihu.
Ọnọdụ niile siri ike ịkọwa maka Gerard. N'ụzọ dị mwute, mgbe ọ nụrụ akụkọ ahụ, nwatakịrị ahụ dara ogbenye hapụrụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ otu ụbọchị - ya na uwe Espanyol nke ọ na-eyi. Nke a bụ ihe ọ na-agaghị echezọ n'egbughị oge.
Otu Gerard Moreno Family siri nyere ya aka:
Eziokwu ka ekwuru, nwatakiri obula nke biri ndu site na ulo akwukwo ajuju gha agha amara nke oma ihe ojoo na nsogbu obi o nwere ike inwe.
Obi dị m ụtọ, Gerard Moreno dị njikere iji uche mee ụdị ihe mgbu a. N'oge ahụ, ọ tinyere nkuzi nwata nke papa ya (Didac). Ihe malitere ịdị bụ okwu ndị a mere ka ọ bụrụ nkịta.
Omume nke ịtụ anya nke kacha mma, inwe olile anya maka ihe kachasị mma, ịkwadebe maka nke kacha njọ, na ịgaghị iju gị anya na ndakpọ olileanya.
N'icheta okwu ndị a, Gerard nwere ike nweta nkasi obi site na ihe dị ka eziokwu nsogbu. Ndị nne na nna Gerard Moreno na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ gwara ya ka ọ gaa n'ihu - nke o mere. N'okwu ya;
Ndị mụrụ m na nwanne m nwoke eburula ụzọ kwadebe m nke ọma ka ọnọdụ ahụ wee ghara ijide m na mberede. Nke ahụ nyeere m aka iwe iwe na ọjụjụ m jụrụ. N'ezie, ihe ndị a na-eme.
Mgbe otu ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ football mechiri, ụzọ ọzọ ga-emeghe. N'ime izu ole na ole mgbe ọjụjụ gasịrị, Club de Fútbol Badalona ji aka na-anabata Gerard Moreno.
Nke a bụ ụlọ akwụkwọ mmuta nke Spanish na-adabere na Badalona, ​​na obodo kwụ ọtọ nke Catalonia. Ha dị n'otu mpaghara ebe ndị nne na nna Gerard Moreno bi. N'ezie, dị nnọọ 25 min (Kilomita 19.4) site na ebe obibi ha.
Gerard Moreno Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Tinyere iri nri kwesịrị ekwesị iji mee ka uto ya dị elu, nwatakịrị ahụ na-eto eto kwere nkwa ịghọ onye a ma ama.
N'ịbụ ọ theụ nke ezinụlọ Gerard Moreno, nwatakịrị ahụ - n'afọ nke abụọ ya na CF Badalona - mebiri ndekọ Njikọ Mba site na ịchọta ihe mgbaru ọsọ 42 n'otu oge.
Maka m, ọ dị ka Raúl González, n'ihi ikike aghụghọ ya, ezigbo ije na ike akara. Na mgbakwunye, Gerard nwere mkpụrụ ndụ asọmpi obi ọjọọ. Mgbe ụfọdụ, ọbụna ihe ijuanya maka nwa nwoke ọgbọ ya.
Nkwupụta ahụ dị n'elu bụ nke Manolo González gosipụtara, onye bụ onye nkuzi Gerard Moreno na Badalona.
Mgbe Gerard mebiri ndekọ a, Espanyol agụmakwụkwọ management mara. N'ezie, omume ha mechuru ha ihu na ha nwere ike ịchụpụ otu ihe ozugbo. Lluís Planagumà, onye bụbu onye nchịkwa nke Espanyol kwupụtara otu oge;
Gerard bụ onye nlekọta ugbu a. Enye ama owụt mmọ ke mmọ ikenenke.
Akụkọ Gerard Moreno Villarreal:
Oge ikpeazụ ya na CF Badalona - dịka kpakpando agụmakwụkwọ bịara ka mma. N'afọ ahụ 2010 hụrụ Gerard akara ngụkọta nke ihe mgbaru ọsọ 41 na egwuregwu 34 maka ụlọ ọrụ ahụ. Dị ka a tụrụ anya ya, nnukwu klọb - dịka nke Real Madrid na Villarreal - malitere ọchịchọ ịwakpo nwata ahụ.
N'ịhụ ndị a na-achọ ịlụ, nna Gerard Moreno maara ihe ga-eme n'ọdịnihu - nke bụ oku a na-akpọ iji nyochaa ụlọ ọrụ ọzụzụ. N'ihi nnukwu nrọ ịmalite obere, ọ nakweere Villarreal CF dị obere karịa Real Madrid.
Ha kpọọrọ anyị gaa ụlọ ọrụ klọb ahụ, ha kọwaara anyị ihe ndụ m ga-adị ka ibi na ọwụwa anyanwụ nke Spain. N’ikpeazụ, papa m nyere Villarreal okwu ya.
Gerard kwuru banyere ahụmịhe nke ileta ụlọ ọrụ Villarreal CF tupu ọ banye na klọb ahụ. Na klọb ahụ, kpakpando na-arị elu nke Spanish na-aga n'ihu na-atụle ihe mgbaru ọsọ, ihe omume nke mere ka ọ banye na football.
Jiri ugwo kwụọ ụgwọ ya
Na 8 July 2013, Gerard kpebiri na ya ga-aga ahụmịhe n’ebe ọzọ. Ọ bịanyere aka na RCD Mallorca (na Spanish Nke abụọ) site na mbinye ego. Gerard nwetara ike ebe ahụ dịka ihe mgbaru ọsọ 12 iji chebe ụlọ ọrụ ya site na mbupụ.
Mgbe ọ gbasịrị ọtụtụ - na obere oge, nwata ahụ laghachiri Villarreal bụ onye weghaara n'oge ahụ na La Liga. Ọ lọtara, na nke ugbu a, ya na ebum n'uche ya.
Gerard Moreno Bio - Akụkọ nke Ọma:
Ọchịchọ igwu egwu na La Liga bụ ọchịchọ kachasị nke Spaniard. Ọ dị mkpa iburu n'uche na na oge 2012/2013, Villarreal CF ya na LaLiga2.
Gerard Moreno nwere ihe mgbaru ọsọ na-emetụta ihe ịtụnanya na klọb dị elu nke Spanish bụ ndị nọ mgbe ọ bịanyere aka na ya. N'ihi na ọ dị mma, otu n'ime ndị La Liga ahụ bịanyere aka na ya.
O juru ọtụtụ ndị anya, Gerard Moreno mere ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche site na ịbanye na klọb (Espanyol) nke jụrụ ya ozugbo. Nye ọtụtụ ndị, ọ kwesịrị ịbụ mmegwara ụtọ maka ọdịnihu. Otú ọ dị, omume ya gosipụtara na ọ nwere obi mgbaghara.
N'eziokwu, Gerard onye ọ bụla mara ụdị onye ọ bụ - na ọ maghị iwe iwe. Site na ịlaghachi na Espanyol, o gosipụtara na ọ bụ ezigbo mmadụ.
N'ezie, onye echefuru echefu nke ndị Espanyol Fans hụrụ n'anya. Gerard Moreno ghọrọ arụsị maka ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na-eto eto. Lelee ụfọdụ n'ime nnukwu ihe mgbaru ọsọ ya maka Blanquiazules.
Villarreal laghachi na Spanish National Team Integration:
Mgbe o gbusịrị ihe mgbaru ọsọ 39 maka RCD Espanyol, onye na-egbu Spanish - na 12th ụbọchị nke June 2018 - laghachiri na klọb ochie ya. Ebe ọ bụ na ọ laghachiri na Villarreal, Gerard gara n'ihu na ọ ga - abụ onye na - eri ihe - ọ bụghị naanị maka ebumnuche kamakwa iji kpebie ihe ga - esi na ya pụta.
Gerard Moreno adịghị mgbe ọ bụla Spain maka ọkwa ntorobịa ọ bụla. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ akụkụ nke otu ndị otu egwuregwu bọọlụ mba Catalonia (n'ihi mgbọrọgwụ ezinụlọ ya). Biko Rịba ama: Catalona anaghị esonyere ma FIFA ma ọ bụ UEFA mana ndị na-agba ụkwụ ha nwere ike igwu maka Spain.
Beghọ Spain's 2020/2021 Best Striker:
N'ihi ike ya na-arị elu ngwa ngwa, ndị isi na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ na Spain enweghị nhọrọ ọ bụla karịa ịkpọ ya. Gerard mere onye izizi mbụ ya maka Spain na 15 nke Ọktoba 2019. Kemgbe ọ kpọchara ya, ọ na-ama okooko osisi, na-aghọ onye zuru oke ngbanwe nke Fernando Torres.
Na Yellow Submarine, Gerard Moreno nọgidere na-enwe àgwà ahụ dị obere nke onye njedebe. Ọ ghọrọ ndị na - agba ọsọ zuru ezu, onye tozuru oke nke zuru oke niile maka ebumnuche ya nke mere ka ewetara ya nsọpụrụ.
-esonụ Unai Emery si mbata site na Arsenal ruo Villarreal, ihe niile gbanwere - ọbụlagodi Gerard Moreno ka mma. Onye na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ Spanish nyere Gerard ohere inwerekwu ohere na ịgagharị na pitch.
Ka m na-ede akụkọ ndụ Gerard Moreno, Spaniard nwere nde kwuru nde 100 na ya ugbu a bụ nnukwu akụkụ nke ihe ịga nke ọma na Europe.
Ọganihu Villarreal gbawara ugbu a mgbe ọ dị afọ 29 mgbe ndụ nwata ya dị obere. O doro anya na Moreno wepụtara ndị kachasị mma n'etiti ndị otu ya - otu ihe atụ bụ ihe ndị na-amasị ya Samuel Chukwueze na ndị ọzọ.
Na-enweghị ajụjụ, vidiyo a bụ ihe akaebe na mama gburugburu Nsogbu Villarreal - dika oge 2020/2021 bụ eziokwu.
N'inwe ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ nye aha ya, Gerard nwere nnukwu aha na-amasị ya ugbu a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo na Robert Lewandoski wdg ndị ọzọ, dị ka Lifebogger na-ekwukarị banyere Biography a ugbu a akụkọ ihe mere eme.
Ọnye na-bụ Nuria Moreno? Nwunye Gerard Moreno:
N'azụ nwa amaala Santa Perpètua na-aga nke ọma, e nwere WAG mara mma. Nwanyị a mara mma abụghị Nuria Moreno. Gerard Moreno bụ nwoke nwere obi ụtọ nke gbara akwụkwọ wee gaazie ịlụ ezigbo enyi nwata.
Ikpe ikpe site na foto nke dị n'elu, ị ga-anụ ezigbo ọbụbụenyi gị. Nuria na Gerard maara onwe ha mgbe ha dị afọ iri na ụma n'ụlọ akwụkwọ. Ya na ya nọnyeere ọbụna n'oge ọ na - ajụ Espanyol.
Ezinụlọ Nuria si Catalonia - otu mpaghara dị ka di ya. Ha abụọ dated ruo afọ itoolu siri ike tupu ha ekpebie iwere njikọ ha na ọkwa ọzọ. Gerard Moreno na nwunye ya Nuria kekọtara eriri ha na agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ na 29th ụbọchị nke June 2018.
Kemgbe ha lụrụ, di na nwunye ahụ ejirila ụmụ gọzie. Na 4th ụbọchị nke Eprel 2017 (tupu agbamakwụkwọ ha), Nuria na Gerard nabatara nwa mbụ ha, nwa nwanyị ha kpọrọ Melissa Moreno.
Afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị ime ọzọ, Nuria mụrụ nwa ha nke abụọ, Marta Moreno. Ọ bịara n'ụwa n'ụbọchị 3 nke Machị 2020 - n'oge okpomoku nke ọrịa COVID-19.
N'agbanyeghị ọrụ ya na-arụsi ọrụ ike, nna nke ụmụ abụọ ka na-ewepụta oge maka ezinụlọ ya. Ha na ebi ndu na obi uto ma dikwa ka obi uto na ndu ha. Dika edere anya, Nuria na Gerard emeela ihe omuma ime ka ihu umu ha ghara idi.
Oge Oge na Nuria, Melissa na Marta:
Halloween bụ ezigbo ọgwụgwọ maka ezinụlọ Gerard Moreno. Nke a bụ ụbọchị nna nke atọ na-ekpughe ọkpụkpụ n'ime ya. Nuria na-ahọrọ okpu bat.
Gerard Moreno Ndụ Nke Onwe:
Mara agwa ya n'èzí football ga-enyere gị aka ịchọta ya n'ụzọ zuru ezu. Vidio dị n'okpuru na-aza azịza nye ajụjụ a - Whonye bụ Gerard Moreno?
Ihe izizi banyere Gerard bụ na ọ bụ onye ala - onye nwere ezigbo obi. N'ikwu okwu banyere ịdị umeala n'obi ya, onye bụbu onye njikwa Spain gwara Marca;
Gerard onye ị ga - ahapụ ka ọ lụọ nwa gị nwanyị. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ nwoke nwere nsọpụrụ, onye eziokwu, na-arụsi ọrụ ike nke nwere ọtụtụ ndidi na ịdị umeala n'obi ichere, rụọ ọrụ iji meziwanye.
Gerard Moreno si ebi ndụ:
Ikwu eziokwu, Achọghị m ka ndị mmadụ na-ekwu maka m, ọ naghị amasị m ịhụ onwe m na akwụkwọ akụkọ ahụ.
Ndia bu okwu nke Gerard Moreno. Ọ bụghị ụdị ndị na-agba ọsọ na-eji akaụntụ ụgbọ ala ya na ụfọdụ ụgbọ ala ụgbọ ala mara mma, nnukwu ụlọ wdg. Ọ na-ebi ndu na-enye ume ọhụrụ.
Ihe omume ntụrụndụ - Ebe ọ na-emefu ego ya:
Dị ka gị ma ọ bụ m kwetara na anyị hụrụ ndị ọkacha mmasị anyị NBA n'anya, enwere ụfọdụ ndị ama ama ama ama na ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị maara, Gerard Moreno bụ nnukwu onye na-akwado New York Knicks. Spaniard, ndị ọzọ na ezinụlọ ya na-eleta United States iji lelee egwuregwu NBA.
N'ihe banyere ndụ ya, Gerard nwere mmasị n'echiche nke ịgagharị ụgbọ mmiri n'oké osimiri. Hapụ football na ihe niile bụ ụzọ zuru oke iji weghachite ike furu efu. Maka Gerard, ọ na-eweta udo nke uche zuru oke ma na-eme ka mkpụrụ obi dị jụụ.
Gerard Moreno Lifestyle - A na-ese ya foto iji nweta ezigbo ọgwụ vitamin.
Ọ bụrụ na ọ nọghị na njem ụgbọ mmiri, Gerard Moreno na nwunye ya Nuria na-ahọrọ ịnụ ụtọ ikuku dị ụtọ n'akụkụ oke osimiri. Ndị enyi abụọ ahụ na-ebi ndụ na-atọ ụtọ, ọkachasị nke metụtara iche echiche nke ịma mma nke okike.
Gerard Moreno bụ nnukwu onye na-akwado ihe ncheta akụkọ ihe mere eme, obodo ndị dị n'akụkụ oké osimiri na nnukwu ụlọ ochie. N'otu oge, a na-ese ya gburugburu Red Square & Katidral St. Basil. Nke a bụ otu n'ime ama ama ama ama Russia.
Ndụ Gerard Moreno Ezinụlọ:
Maka onye nwe Santa Perpètua, ịhụ ezinụlọ ya n'anya bụ otu n'ime ngọzi kachasị ukwuu na ndụ ya. N'ezie, ọ dịghị ego ego bọọlụ nwere ike iweghara oge dị oke ọnụ Gerard Moreno na ndị ezinụlọ ya na ndị ezinụlọ ya.
Nke a bụ ihe Ezinụlọ pụtara Gerard Moreno.
Ezinụlọ dum na-ewulite mmekọrịta miri emi na ịhụnanya site na ịmekọ ihe dị mfe ọnụ. Otu n'ime ndị dị otú ahụ gụnyere iri nri ezinụlọ. N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị gbasara nne na nna Balagueró na nwanne ya.
Banyere Gerard Moreno Nna:
Didac Moreno na-eme ncheta ọmụmụ ya ụbọchị 28 ọ bụla nke Eprel. Gerard Moreno's papa bụ onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ na-egwuri egwu nwa amateur Spanish ka ọ bụrụ nọmba 10.
Dị ka nchọpụta anyị si kwuo, Didac Moreno mere ya na Tercera División (Spanish football football nke anọ) tupu ịkwado akpụkpọ ụkwụ ya (ịla ezumike nká). Ọ na-esiri nnukwu nna ike ịnagide ezumike nká. Obi dị m ụtọ na nwa ya nwoke na-ebizi nrọ ya.
Banyere Gerard Moreno nne:
Nke mbu, o na-eme ncheta omumu ya n’abali iri-abuo na asaa nke onwa asatọ. Dị ka di ya, ezinụlọ ya sitere na mpaghara Catalonia, na ugwu ọwụwa anyanwụ Spain.
Nne Gerard Moreno mụrụ aha Balagueró tupu ya alụọ di Didac. N'okpuru ebe a, o nwere ọnụnọ nne nke na-akasi ndị ezinụlọ ya obi.
Gerard Moreno Nwanna:
Dị ka anyị si mara, Forward nwere naanị otu nwanne. Nwanne Gerard Moreno dị ka ya onwe ya ghọkwara ndị ịgba egwu bọọlụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị onye na-elekọta ezinụlọ, ọ na-egwu dị ka nọmba 10.
Dabere na Marca, nwanne Moreno dị ezigbo nso. N'oge oge ezumike, a na-ese ha oge na-anwale egwuregwu ndị ọzọ. Ihe kachasị amasị ha bụ ogologo tenis.
Zute Nwanna Gerard Moreno. A na-ese onyinyo ha abụọ na-anwale egwuregwu ndị ọzọ.
Gerard Moreno Eziokwu:
Ebe anyị gafere na Spanish's Bio, anyị ga-eji ngalaba mmechi a kpughee eziokwu ndị ọzọ gbasara ya. Ugbu a, ka anyị bido.
Eziokwu # 1 - N'iji ụgwọ ọnwa ya na Nkezi Citizen:
Kemgbe ị malitere ile Gerard Moreno'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
AHEN / WAGES
Gerard Moreno Villarreal Salary (na Euro €)
Kwa Afọ € 3,142,802
Ọnwa kwa: € 261,900
Kwa Izu € 60,345
Kwa :bọchị: € 8,620
Kwa elekere: € 359
Kwa Nkeji € 5.9
Sekọnd ọ bụla: € 0.10
Onu ogugu nke nwa amaala Spanish nke na-akpata 2,710 EUR kwa ọnwa ga-achọ afọ 22 iji mee ụgwọ Gerard Moreno kwa izu na Villarreal. Dika ozo, ọnwa 3 iji mee ihe Spaniard na-enweta kwa izu.
Eziokwu # 2 - Gerard Moreno Religion:
Onye Spaniard sonyere karịa 58% nke ndị bi na Spanish bụ ndị Roman Katọlik nsụgharị nke Iso Christianityzọ Kraịst. Agbanyeghị, amachaghị ma nne na nna Gerard Moreno zụlitere ya dịka onye Katọlik.
Nke a bụ n'ihi na anyị ahụghị ya ka ọ na-egosipụta okwukwe ya n'ihu ọha. Ọ dị mkpa ịmara na Gerard nwere agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ ya (ya na nwunye ya, Nuria) na chọọchị Katọlik.
Eziokwu # 3 - Gerard Moreno Profaịlụ:
N'ihe banyere agha ndị na-akpasu iwe, Spaniard ga-ama jijiji na FIFA. Kpakpando ndị dị n’okpuru na-ekpughe eziokwu ahụ bụ na Gerard dị oke ala. Gerard dị nnọọ ka ya Harry Kane n'ihe gbasara imecha.
Maka azịza Wiki ngwa ngwa banyere ndị ọkachamara na-egwu egwuregwu Spanish, jiri obiọma jiri okpokoro dị n'okpuru.
GERARD MORENO WIKI AJ .J.
Aha n'uju: Gerard Moreno Balagueró
Ụbọchị ọmụmụ: Bọchị 7 nke Eprel 1992
Age: 39 afọ na ọnwa 3.
Ezinụlọ Ezinụlọ: Santa Perpètua
Ndị nne na nna: Didac Moreno (Nna) na Oriakụ Balagueró (nne)
Ụmụnne: Nwanne na enweghi nwanne
Nwunye: Nnenna Moreno
Children: Melissa na Marta Moreno (daughtersmụ nwanyị abụọ, enweghị nwa nwoke)
elu: 1.80 mita (5 ụkwụ 11 sentimita asatọ)
Religion: Okpukpe Ndị Kraịst (Roman Katọlik)
Onye nnọchi anya: First Egwuregwu mbụ
Education: Damm, Espanyol na Badalona
Ezigbo Net: 9 Nde Euro (2021 stats)
Ihe omuma nke Gerard Moreno na-akuziri anyi na anyi aghaghi idozi uche iji chee nsogbu nke ndu ihu. Dika ozo, nke a bu ihe kwesiri ka ndi o bula choro igba oso uzo ndi ozo.
Ndị nne na nna Gerard Moreno bụ papa ya (Didac) kwadebere ya na nwanne ya nwoke na a ga-eche na ha ga-adị ndụ. Dị ka edere ya, Spaniard nwere ike imeri ịjụ Espanyol site na ime ka agwa ya sie ike ma belata atụmanya ya.
N'ime oge edere Gerard Moreno's Bio, anyị chọtara ihe banyere ya - otu n'ime àgwà ya kachasị ukwuu. Ọ dịghị onye ọzọ ọ bụ karịa mmụọ ịgbaghara mmehie ya. N'ịbụ ndị na-abịa site na ezinụlọ dị umeala n'obi, ndị ịgba ọsọ ụkwụ egosila anyị akara nke nnukwu agwa ya.
Daalụ maka ịnọnyere anyị ruo ugbu a - na edemede a na-akpali akpali banyere Life Life of Gerard Moreno. Na Lifebogger, ndị otu anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ na ntụgharị anyị nke ịnye akụkọ nwata nke ndị egwuregwu bọọlụ Spanish.
Jiri nwayọ rute Lifebogger site na kọntaktị anyị ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya na Memoir a banyere Spaniard - Gerard Moreno. Anyị ga-enwe ekele maka ya ma ọ bụrụ na ị tinye nkọwa banyere echiche gị na ndị na-agba ọsọ Spanish.